“Baobabs entre terre et mer” : « Film » nandrombaka “Awards” 34 | NewsMada
“Baobabs entre terre et mer” : « Film » nandrombaka “Awards” 34
Taom-pahombiazana ny 2015 sy ny 2016 ho an’ilay horonantsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe « Baobabs entre terre et mer », notontosain’i Cyrille Cornu ary novokarin’ny Lokobe Production. Sarimihetsika mikasika ny baobab, hazo goavambe, mahavariana sy anisan’ny mampiavaka an’i Madagasikara, satria eto no ahitana karazany be indrindra.
Nahita fahombiazana ity horonantsary fanadihadiana ity ary tena malaza, indrindra eo amin’ny mpankafy zavaboahary sy ireo manampahaizana eran’izao tontolo izao, mikaroka momba ny harena voajanahary.
Hatramin’ny taona 2015 noho mankaty, mitotaly 34 ny « awards » na ny loka azony tamin’ny « festivals » sy hetsika samihafa. Marihina fa loka voalohany ny efatra amin’ireo. Ankoatra izay, in-104 izy no voafidy ho anisan’ireo horonantsary nalefa tamina “festivals” iraisam-pirenena.
Anisan’izany ny tany amin’ny “Environmental Film Festival in the Nation’s Capital », tany Washington ny marsa 2016 sy tany amin’ny « Krakow Film Festival » tany Pologne ny volana jona teo. Efa nahita ity “film” fanadihadiana momba ny baobabs aty Madagasikara ity ny firenena 50 maneran-tany.
Hisy ny famokarana ny horonantsary mikasika ny tohin’ny fanadihadiana momba ny baobabs, araka ny nambaran’ny mpanatontosa azy. Hiompana kokoa amin’ny karazana baobabs, ny fivoarany ary ny fiarovana azy manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro izany.